I-Raw Fasoracetam powder (110958-19-5) hplc =98% | AASraw Nootropics
/ iimveliso / I-Nootropics powder / IFasoracetam powder
SKU: 110958-19-5. Udidi: I-Nootropics powder
I-AASraw inokusetyenziswa kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwinqanaba le-Fasoracetam powder (i-110958-19-5), phantsi komgaqo weCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
IFasoracetam powder limhlophe kumfumba omuncu ongenakunqwenela, obunzima kakhulu kunambitha. Kuyinto echasene ne-amnesiac kunokuba i-piracetam, kwaye isebenza njengesistim se-nervous system eshukumisayo. Kuyinto ehambelana nemimandla ephakamileyo kunye nokunyusa umsebenzi we-nitric oxide synthase kwi-cortex ye-cerebral. Efana ne-piracetam, imiphumo yokuhlanganiswa kwememori ye-pramiracetam inokupheliswa yi-adrenalectomy.
Ividiyo yeFasoracetam powder
IFasoracetam powder Abalinganiswa basisiseko
igama: IFasoracetam powder
I-molecular Formula: C14H27N3O2
Isisindo somzimba: 158.15
I-Raw Fasoracetam powder powder ekuphuculeni ubuchopho
I-fasoracetam powder inegama lebhizinisi njengeLAM 105, i-NFC-1, i-NS 105.
Ukusetyenziswa kwePowder Fasoracetam
Kulo hlabathi lwanokukhawuleza, kukho imfuno yabantu ukuba bakwazi ukucinga ngokukhawuleza kwiinyawo zabo kunye nemisebenzi emininzi ekusebenzeni kakuhle phantse nayiphi na indawo yengqesho; evela oogqirha bezobugqirha ukuya kubasebenzi benkonzo yokutya abancinci. Imfuneko yokuqhubeka, ukuncintisana nokufezekisa ibonakaliswe kwiikholeji zelizwe lonke. Isidingo sokufumana amabakala aphezulu kunye nokubhala amaphepha afanelekileyo; emva koko, yile ndlela yodwa yokukhuphisana namhlanje eMelika. Abafundi, abaqeqeshi kunye nokubeka abantu ngokufanayo nabo bafuna ukuphucula ukusebenza kwabo. I-Nootropics yintsapho yezilwanyana eziye zafumana ingqwalasela eninzi kwaye zibonisa ukusetyenziswa okuthandwayo. Ngamanye amayeza kwinto eyaziwa ngokuba yiyo, intsapho ye-racetam, zonke zivela kwi-nootropic yokuqala, i-piracetam. La machiza asebenza ekuphuculeni imemori kunye nobungqina bengqondo, ngenye indlela okanye enye, eyabenze bathandwa kakhulu phakathi kwabafundi beekholeji. Kungekudala, enye ye-nootropic yesaziso iye yiFasoracetam powder, okanye igama layo elifanelekileyo "5 - [(piperidin-1-yl) carbonyl] pyrrolidin-2-one", into encinci (Rajaganapathy kunye et. , 5127). Le racetam ethile, eyaziwa njengeFasoracetam powder, ibonisa ukuba iyathembisa.
Akukho nani elisezantsi leFasoracetam powder kubantu. Ubungqina obunobuncwane bubonisa ukuba amanani amancinci ajikeleze i-10 - 15 mg ngamanqanaba amakhulu kwi-30 - 50 mg ngokukhonza kathathu ngosuku.
Iintlawulo zeFasoracetam powder zikho kwi-anecdote, kodwa kukho ezinye iiphononongo zokubonisa ukulungiswa. Ngenxa yokuba kunezigidi zabantwana kunye nabaselula abasetyenziswa ngamachiza e-ADHD ase-amphetamine, iziphumo zokuvavanya i-fasoracetam ziphumo luphawu oluhle. Kulungile, i-fosoracetam powder iye yenze isigaba II ne-III sezilingo zeclini, ezingasikisela ukuphumelela okukhulu kule njongo. Ukususela ngoJuni 2016, isilwanyana sasisezi zilingo.
Ngokutsho kobungqina bokungqiniswanga kwi-Fasoracetam ezinobuncwane obusikiweyo, i-concentration kunye neenzuzo zokuvuselela ziyingqinelana. Omnye umntu wafanisa imiphumo yokuvuselela kwaye enye yathi yayinamandla ngaphezu kokukhuthaza.
Ngaphandle kwezi zinto ezijoliswe kuyo kunye nokuxininisa, kukho ubungqina bemiphumo ye-neuroprotective kwakunye. Olunye uphando lwentambo lubonise ukuba iFasoracetam ipowder eluhlaza inokuthintela ukuphazamiseka kwememori. Oku kuqhelekileyo phakathi komgca we-racetam weziyobisi kwaye kunengqiqo ukuba iFasoracetam powder iya kubonisa ezininzi zeepropati ezifanayo.
Enye inzuzo enomdla yeFasoracetam powder yinjenge-antidepressant and anxiolytic. Uphononongo lwamagundane olwaziwa lukhuni lubonise ukuba le nkunkuma yayineempembelelo ezinamandla kakhulu ngaphandle kweminye yemiphumo emibi (njenge-MAOI intsebenziswano). Olu pho nonongo luye lwagqiba ukuba iGABA (B) up-up-regulation yayikwazi ukwandisa iziphumo zovavanyo kwizilwanyana.
Isilumkiso kwi-Fasoracetam Raw effects effects
Kukho akukho miphumo eyaziwayo yamacandelo e-Raw Fasoracetam kwiincwadi zenzululwazi, kodwa oko akuthethi ukuba akhululekile kwimingcipheko. Akukodwa nje naziphi na iziyobisi ezisetyenziswayo ezinobungozi, kodwa ubungqina be-anecdot kwiindawo eziziimveliso zonyango zingasichazela izinto ezimbalwa malunga neziyobisi.
Ngenye, ezinye iingxelo ze-anecdotal ziphakamisa ukunciphisa kwiidrafms. Umntu othile ukhankanyile esi siphumo, kodwa kubonakala ngathi akanqabile kwaye mhlawumbi udidekile kunye nezinye iinguqulelo.
Abasebenzisi be-nootropics ixesha elide banokucinga ukuba i-Raw Fasoracetam powder iyinto ehlekisayo (kubonakala ngathi intsha ikhutshwe nyanga zonke), kodwa le yinto entsha yokuhlanganiswa eyinxalenye yentsapho ye-racetam. I-Synthesized kwi-1960, i-piracetam yowokuqala kwintsapho kwaye iyaqhubeka ibe enye yezidakamizwa ezidumileyo ze-nootropic kwimarike.
Iintlawulo zePaw Fasoracetam powder zikhulu kakhulu, kodwa kukho uphando olusisigxina lokubuyisela amabango. Njengokuba kubhaliweyo, i-fasoracetam powder ivavanywa kwiSigaba II / III izilingo zonyango ukwenzela ukuba ingqalelo ingxaki yokuxhatshazwa kwengxaki (ADHD) .
Ezinye izibonelelo ezinxulumene nazo zihambelana nokukhuselwa kwememori  njengoko kuqhelekileyo kwiintsapho ze-racetam. Kukho iingxaki ezinxulumene nokukhathazeka kunye nemizwelo enokuthi ingabangelwa yimpembelelo kwimveliso ye-GABA kwingqondo . Nangona ubungqina obunqabile kwaye engaphelelanga, kukho ulwazi oluninzi lokubonisa ukuba ingaba i-nootropic esebenzayo yokusebenza kwengqondo jikelele.
Izifundo zibonisa ukuba i-pramiracetam inokuthi:
Ukwandisa ukuhamba kwegazi
Ukuphucula imemori yexesha elide kunye nokufunda kwendawo
Ukwandisa i-choline ephezulu
Ukwandisa i-nitric oxide synthase kwi-cortex ye-cerebral
Ukunciphisa iziphumo zeziyobisi ze-amnesiac
YINTONI I-FASORACETAM POWDER?
I-Fasoracetam Powder iyinxalenye ye-nootropic kwintsapho ye-racetam ye-nootropics. Iiplanga ziquka iqela elikhulu leemveliso ezihlukeneyo, zonke ziguqulwa ukusuka kumzali wePiracetam, owafunyanwa kwi-1960s. Isakhiwo samakhemikhali seFasoracetam ngu: (5R) -5- (ipiperidine-1-carbonyl) pyrrolidin-2-enye.
I-Fasoracetam inokunceda ekuphuculeni amanqanaba oxinzelelo kunye nomoya.
INDLELA YOKUSEBENZA NGOKUSEBENZA KWEFASORACETAM?
I-Fasoracetam Powder isebenza ngokuguqula i-receptors kwingqondo. Isebenza kwi-cholinergic, i-GABA, kunye ne-glutamate receptors, bonke abadlala indima ekwakheni nasekugcineni izikhumbuzo ezintsha. Njengamaqela amaninzi e-nootropic kunye nemidyarho yamanye, iFasoracetam Powder iyichaphazela ingqondo ukuba ivelise ngeenzuzo ezinengcamango ezintle.
Ubungqina bobuncinci kunye nophando lubonisa ukuba i-Fasoracetam powder ingakwazi ukuphucula imemori kunye nokugxilwa, ukuphucula uxinzelelo, ukukhuthaza umoya, kunye nokunceda ukubetha ukukhawuleza ngokunyusa ukukhuthaza nokucaca kwengqondo. Abasebenzisi abathengayo ingxelo yePasoracetam Yokwenza ifowuni bayakwazi ukwenza ngaphezulu, bafunde ngakumbi ngokufanelekileyo, kwaye balondoloze isimo sokuzola xa beva amandla.
IFasoracetam Raw Powder
I-Raw Fasoracetam yokuThengiswa kwePowder
Indlela yokuthenga iFasoracetam powder esuka kwi-AASraw
I-Fasoracetam Raw Powder Recipes:
I-Fasoracetam izibuyekezo zokuphononongwa, umlinganiselo, umphumo